NINNA DHALASHUU KUUGU DHIIDHIYEY NINNA DHAQASHUU KUUGU DHAADHACAY NINNA DHUUNUU KUU DHEX JOOGA Waa Qalinkii Liibaan Cumer |
NINNA DHALASHUU KUUGU DHIIDHIYEY NINNA DHAQASHUU KUUGU DHAADHACAY NINNA DHUUNUU KUU DHEX JOOGA Waa Qalinkii Liibaan Cumer
Tiiyoo dalku guud ahaan ku jiro xaalado abaareed oo aad u adag, gaar ahaanna Gobolka Gabiley iyo Galbeedkaba aad u saamaysay ayaa waxaa haddana barbar socda arrimo dhalliil innagu haddaynu nahay dadka ku dhaqan Gobolka Gabiley. Waxan ka mid ah ceebeynta iyo aflagaadooyinka loo jeedinayo madaxda bir ma geydoda ah ee Ilaahay gobolkan ugu deeqay, oo uu ugu horreeyo Mayor M/Amiin Cumar Cabdi oo hadda ah Duqa magaalada Gabiley. Maqaalkan oo u badan dareen gelin iyo hogatusaalayn shacab, waxan kaga hadli doonnaa fadeexadaha yar ee ka soo ifbaxaya dad kooban oo dhallin yaro, waayeel iyo madaxba iska leh aadse aan u badnayn, oo caadaystay inay lid ku noqdaan habsami u socodka maamul ee uu maayorku ku tallaabsaday maalintuu yimid illaa maanta oo uu ku sugan yahay.
Haddaan dib idiin xasuusiyo imaatinkii xildhibaannimo, Mayor Amiin Cumar waa qof ku yimidday mansabkan sifo cilmiyeysan oo caqli fayoobi ka taliyey, taasoo ka madax bannaan hayb hayb iyo beeleysi. Doorashadii golaha deegaanka ee uu xildhibaannimada u sharraxnaa waxa uu ahaa musharraxa keliya ee dhallin yarta iyo aqoonyahanka gobolka Gabiley oo cidwalba lihi u halgameen siday ku keeni lahaayeen xubinnimada golaha deegaanka, tiiyoo hal ku dhiggiisa uuga dhignay, “AAYAHAAGA RUUX JECEL, OO AAD KU WEYNTAHAY, AYAA KUU ARRIMIN KARA”. Ilaahay mahadi ha ka gaadhee waa noo aqbalay waanu yimid. Ereyada hal ku dhegga ahi waxay ka marag kacayaan inuu ahaa qofka bulshada u damqanaya ee danahoodu ku weyn yahay inuu ahaa Maxame Amiin, kuu arrimin kara waxay sii saadaalinaysay maayornimadiisa maanta, Allena waa noo rumeeyey. Wareeggii labaad ee mayornimada waxa qof walba marag ka ahaa in sifo wax qabad iyo aamminnimo lagu soo xushay taasina waa lagu guulaystay. Maanta oo uu mayorku yahay duqa magaalada Gabilay iyo maalintii uu ololaha ku jiray iyo in ka horreysay oo uu sifil ahaaba waxa aanu maayorku marnaba ka caajisin u dirnaanta danaha bulshada, waananu ka filaynay, mahad weyna waanu u haynaa.
Waxan anigu aamin sanahay maayorku inuu yahay gurmad ilaahay u soo diray gobolka Gabiley. Waxana taas ka maraga 10 tilmaamood oo aad ugu yar madaxda dhiggiisa ah ayuu Eebbe weyne isku raaciyey mayorka Gobolka Gabiley. Waxana ka mid ah aniga oo soo koobaya, ‘Dulqaadka, ballan adkida, aamminka, firfircoonida shaqada, is dhuldhigga, hanti dhowridda, weji furnaanta iyo qancinta dadka, habrasho la’aanta, cibaadada badan iyo karaamaynta dadka. Sifooyinkaas oo qof kasta oo Mayor Amiin aad u yaqaanna amaba la kulmay uu ka markhaati kici doono. Waxa kuugu filan tusaale, maalintii la doortay illaa maanta Xafiiskiisa lagama waayin saacad qudh ah dan uu uga baxo mooyaane, qof kasoo cawday ballan burinna ma jiro, waxa taas ka sii yaab badan inta jeer ee mediaha laga fadeexeeyey ama dad madax matalayaa qas isku dayeen, hal mar umuusan jawaabin mana daba gelin, hantidii dadka ee loo igmaday waxa la wada ogyahay shilin sharci darro kaga baxa dawladda hoose waxa ugu dambaysay maalintii uu xilka la wareegay, joogtaynta shaqada xafiisyada dawladda hoose 7da subaxnimo illaa 1da iyo dheeraad waxa markhaati laga yahay in shaqadu uga socoto sidii la rabay. Qof kasta oo ummada ka mid ah oo maayorka hor tagay waxa uu kala kulmaa weji furan iyo hadal uu ku qanco taasina waa marag ma doon. cid kasta oo uu u arko inay lid ku tahay danta dadka uu mas’uulka ka yahayna uma aabbo yeelo umana hamrado ee waxa uu ka qaadaa tallaabada ku habboon.
Haddaba, Waxa qof sharaf dhac ugu filan inuu dadka u taliya ceebeeyo. Sidaan culimada diinta Islaamka ka maqalnayna dadyow hore oo la halaagay waxa lagu tilmaamay inay madaxdooda caayi jireen qaarkoodna diliba jireen. Madaxdoo la caayaa waa sifo foolxun oo gunnimo ku tilmaaman. Waxaba taas ka sii daran markaad u kuur gasho maxaa qofka wanaagsan loo caayayaa halkii laga amaani lahaa waxaabu sheeganayaa inuu hunguri ugu dudayo amaba dan shaqsi oo uga hir geli weyday ku bursanayo. Taasina waaba gunnimo labaadoo qofka hunguri kaaga duday waa qof kaa dhintay, horey Soomaalidu u tidhi “nimay soori kaa qaadday, waa nin seefi kaa qaadday”. Waa kii geela loogu heesi jirey “ninna dhalashuu kuugu dhiidhiyey, ninna dhaqashuu kuugu dhaadhacay, ninna dhuunuu kuu dhex joogaa”.
Aniga oo ka mid ah barayaasha gobolka Gabiley wax ka dhiga, aadna looga garanayo, saxaafadda iyo wax ku qoristeedana aan ku badnayn waxan aad uga xumaaday qofkii mudnaa in lagu garab galo wax qabadka ummadda gobolka Gabiley in ceebeyn loogu beddelayo. Waxaan ku talin lahaa waar wax kastaa birma geydo ayuu leeyahaye, bal hadallada u meel daya dadkana la kala hadha oo in baa jirta wax ka sheeggooda dadkubaa aanu kaa rumaysanayne u toog hay.
Kol hadduu sifahaas ku soo baxay, xilkana sifahaa kale ku yimid, maantana uu tilmaamahaa wanaagsan leeyahay aan ku ilaashanno ilaahayna ku mahadinno. Madaxda wanaagsani bulshada wanaagsanbay astaan lagu garto u tahaye ha inna gumaynina.
Guntii iyo gebagebadii waxan Mayorka leeyahay “Maayor, horey Soomaalidu u tidhi, dad iyo duunyaba waxaanad filanayn baa kaaga soo baxa”. Dadka aad maamulka u tahayna in wanaagsan way ku badan yihiin, qaar xunna waa laga helayaa, eedaha raqiiska ah badankoodana xilka iyo tuhun baa sabab u ah, dul u yeelo, ilaahay xagiisa ayaad ka heli, yaanay saamayn ku yeelanin sida wanaagsan ee aad waajibkaaga u gudanayso, waxbana kaaga qaadi maayaan intii ku soo saartay way ku taabacsanyihiin waanay kaa xaal marinayaan,waxanay ku leeyihiin hiil iyo hooba garabkaaga naga eeg”……
Macallin Liibaan Cumar Cabdi